किन पक्राउ परे वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक ? – Satyapati
Loading... आजः शनिबार, असार २७, २०७७/ Saturday 11th July 2020 9:47 am
किन पक्राउ परे वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक ?
सत्यपाटी । शुक्रबार, असार १२, २०७७
बाँके । किर्ते कागजात बनाएर ऋण दिएको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक पक्राउ परेका छन् । नेपालगन्जस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्रिभुवन चोक शाखाका प्रबन्धक ललितबहादुर शाही पक्राउ परेका हुन् । उनीसँगै नक्कली कागजपत्र धितो राखेर ऋण लिएका नेपालगन्जका सुनचाँदी व्यवसायी रिजवान अहमद जसगढमाथि छानविन सुरु गरेको छ ।
नेपालगन्जका सुनचाँदी व्यवसायी जसगढले जग्गाको लालपूर्जा, नक्सा, कर तिरेको रसिद सहितका कागजपत्रहरु नक्कली बनाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको त्रिभुवन चोक शाखाबाट रु.एक करोड २५ लाख ऋण लिएका छन् । सो घटनामा जसगढ यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् भने वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक शाहीलाई आज शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो ।
बैंकका अरु कर्मचारीसँग पनि बयान लिने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारी छाप किर्तेको अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान हुदाँ बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि तानिन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकका अन्य कर्मचारी पनि कानूनी कारबाहीमा तानिने देखिएको छ ।
बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा रु.२५ लाखभन्दा बढीको ऋण स्वीकृति गर्नुपरे सम्बन्धित बैंकको केन्द्रिय कार्यालयले अनुमति दिनुपर्छ । नक्कली कागजपत्र राखेर, सरकारी छाप किर्तेलाई स्वीकृत भएर ऋण गरि रु.एक करोड २५ लाख प्रवाह हुँदा बैंकका कर्मचारी, धितो राखेको कागजात, सम्पत्ति रोक्का गर्ने भूमी तथा मालपोत कार्यालय तथा सम्पत्ती मूल्यांकन गर्ने कम्पनी समेतलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनेछ ।
नक्कली कागजात किर्ते गर्ने नेपालगन्जका सुनचाँदी ब्यवसायी रिजवान अहमद जसगढले नेपालगन्जका आधा दर्जन बढि बैंकबाट करोडौंको ऋण लिएको खुल्न आएको छ । बैंकले कुन आधारमा, कसरी ऋण प्रवाह गरेको हो यसमा कुन–कुन व्यक्तिको मिलोमतो रहेको छ, यस बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।